‘आफन्त’ सञ्जाल सञ्चालनमा: साना व्यवसाय, पेशा तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने ! « GDP Nepal
‘आफन्त’ सञ्जाल सञ्चालनमा: साना व्यवसाय, पेशा तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने !
काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय र पेशा प्रबद्र्धन गर्नुका साथै उद्यमशीलता विकाश गर्ने उद्देश्यले आफन्त नामक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको ‘आफन्त’ को प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालले ‘आफन्त’ लाई साना उद्योगी र तिनका उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्न सघाउने किसिमले सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । सरकारका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिवद्घता जनाउँदै उनले भने, ‘एप र सञ्जालहरुको भीडमा यो त्यत्तिकै नहराओस् । उत्पादन, बजार, उद्यमीहरूलाई जोड्न सकोस् । प्रयोगकर्ताहरुलाई सजिलो होस् ।’
विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा रहेर वा नरही नेपाललाई माया गर्ने गैरनेपाली र नेपाली समुदायबीच अन्तरक्रिया गर्ने माध्यम पनि आफन्त रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए ।
बिक्रेता र क्रेतालाई जोड्ने पुलका रुपमा काम गर्ने ‘आफन्त’ लाई नेपालीहरूको अनलाइन साझा चौतारी बनाउन खोजिएको यसका सञ्चालक तथा सम्पादक तेजप्रसाद ढकालले बताए ।
आफन्तमा सबै नेपालीहरुलाई जोडेर व्यापार गराउने उद्देश्य रहेको भन्दै उनले यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजाने बताए ।
रोजगारी दिने र कामको खोजीमा रहेकालाई पनि सहयोग पु¥याउने ‘आफन्त’ प्लेटफर्ममा आफ्नो कम्पनीलाई चाहिएको जनशक्तिबारे विस्तृत विवरण राख्न सकिनेछ । जागिरको खोजीमा रहेकाहरुले पनि आफूलाई उपयुक्त लागेको भ्याकेन्सीमा एप्लाइ गर्न सक्नेछन् । ‘साना उद्यमीहरूका लागि यो राम्रो प्लेटफर्म हो ।’
एनपीइडिसिकी अन्जना ताम्राकारले भनिन्, ‘उद्यमीले बजार नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन् । यो एकदमै ठूलो अवसर हो ।’
गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सामानहरु यस प्लेटफर्ममार्फत बेच्न सकिने आफन्त नेपाल प्रा.ली.ले बताएको छ ।
आम नेपालीहरुको उद्यम व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, ‘त्यसमा जोड दिन्छौं ।’ आफन्त नेपालका सञ्चालक ढकालले भने, ‘संघीय, प्रदेश, स्थानिय सरकारसँग मिलेर अगाडी बढ्ने योजना छ ।’ यो एप एन्ड्रोइड र आइओएस दुबै भर्सनमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।